मिर्गौलामा समस्या हुँदा देखिने लक्षण – Online Bichar
मिर्गौलामा समस्या हुँदा देखिने लक्षण
Online Bichar 20th January, 2020, Monday 11:55 PM
२०७६, माघ ६ । जब मिर्गौलामा कार्यक्षमता कम हुन्छ वा फेल हुन्छ, शरीरमा रहेको विषाक्त रासायनिक पदार्थ, तरल पदार्थ आदि बाहिर निस्कन पाउँदैन ।
मिर्गौलामा जटिल समस्या भनेको, यो खराब भएको अन्तिम अवस्थामा मात्र थाहा हुन्छ । साथै उपचार विधी पनि महंगो हुनेगर्छ । त्यसैले संभव भएसम्म मिर्गौलालाई स्वस्थ राख्न प्रयास गर्नुपर्छ ।
– मिर्गौलामा समस्या हुँदा पिसाबको मात्रा र पिसाब हुने समयमा परिवर्तन हुन्छ ।
– पिसाबको रंग गाढा हुन्छ ।
– पिसाब गरेको गर्दा दुख्छ ।
– पिसाबमा रगत देखिन्छ ।
के कारणले हुन्छ मिर्गौलाको समस्या
जब मिर्गौलामा अत्याधिक दबाब वा तनाव हुन्छ, यस्तो परिस्थितीमा मिर्गौलामा समस्या हुन्छ ।
१.उच्च रक्तचापले मृगौलालाई असर गर्न सक्छ । किनभने उच्च रक्तचापमा हाम्रो रक्त धमनीमा अत्याधिक दबाव पर्छ । यसले हृदय रोग निम्त्याउन सक्छ ।
२. यदि मधुमेहका रोगीले मधुमेहमा नियन्त्रण गर्न सकेन भने शरीरमा अत्याधिक ग्लुकोजको निर्माण हुन्छ । यहि ग्लुकोज जम्मा हुँदा मिर्गौलामा हुने स-साना फिल्टरमा समस्या हुन्छ । त्यही कारण मृगौलाले शरीरको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न सक्दैन । फलत, मिर्गौलामा खराब हुनसक्छ ।
४. जब हाम्रो शरीरले मुत्र त्याग गर्न असमर्थ हुन्छ, यस्तो परिस्थितीमा पनि हाम्रो शरीरमा विषाक्त पदार्थ निर्माण हुन थाल्छ । यहि कारण मिर्गौलामा अतिरित्त भार पर्छ ।
५. मिर्गौलामा आसपास रगत जमेको छ भने पनि मिर्गौलामा कार्यप्रणालीमा नराम्रो असर पर्छ ।
७. अत्याधिक मात्रामा नसालु पदार्थ, मदिरा आदि सेवन गर्दा पनि मिर्गौलाले आफ्नो काम गर्न असमर्थ हुन्छ ।
८. विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिक्स गोली लिँदा मिर्गौलामा हानी पुग्छ ।
मिर्गौलालाई स्वस्थ्य राख्नका लागि सक्रिय दिनचर्या र स्वस्थ्य खानपान जरुरी हुन्छ । आर्युवेदमा दुबै मिर्गौला मुत्रवाहिनी र मुत्राशय आदिलाई मूत्रवह स्रोतको नाम दिइएको छ ।
मिर्गौलामा खराब हुनबाट बच्नका लागि पीपलको पात र निमको पात निकै उपयोगी मानिन्छ । दुबैको मिश्रणलाई राम्ररी पानीमा उमालेर त्यसको रस नियमित मात्रामा पिउनुपर्छ । यससँगै योगले पनि फाइदा गर्छ ।
खासगरी कपलभाती योग नियमित रुपमा गर्नुपर्छ । अनुलोम विलोम लगायत कतिपय यस्तो योग हुन्छ, जसले मिर्गौलामा खराब हुनबाट बचाउँछ । अकुप्रेसर विधी पनि अपनाउन सकिन्छ । हात तथा खुट्टो कान्छी औंला वा हत्केला र खुट्टाको मध्य भागमा निरन्तर दबाउनु पर्छ ।